UJones Oaks: indawo yokuphumla yabucala kwilizwe.
Ifakwe kwindlela yothuli yelizwe, kufutshane ne-D&H Rail-Trail, ibekwe kwiihektare ezi-4 zabucala phakathi kwepine kunye neenkuni eziqinileyo. Kukho abamelwane kumacala ama-2, kodwa ngokwenene uziva ngathi ukwilizwe lakho. Indlu inendawo epholileyo, yasefama iziva kunye nabo bonke ubutofotofo bekhaya elikude nekhaya. Ilala 7 kunye nesofa kunye ne-queen sleeper sofa ngaphezulu. Kukho indawo enkulu egqunywe ngasemva ene-BBQ Grill oyisebenzisayo, kunye nekhitshi lixhotyiswe ngako konke okudingayo ukuze ukonwabisa-yongeza nje ukutya kunye nesiselo!
Ngoku sinebhayisekile kunye neerenti zekayak! I-D&H Rail-Trail, inyawo nje ezingama-500 ukusuka kwindlela yakho, idume ngokukhwela ibhayisekile, ukukhwela intaba, ukukhwela ikhephu kwaye ibonelela ngokufikelela kwiimayile ezingama-450 zomzila. I-Elk Mountain Ski Resort yi-9 miles/25 imizuzu. I-Susquehanna River yi-10 yeekhilomitha, i-Delaware River i-20 yeemayile zokuloba kunye nemidlalo yamanzi kunye ne-PA State Game Lands isondele kakhulu ekuzingeleni. Kwipropathi yethu ekufuphi yeehektare ezili-16, kufutshane nekhaya, wamkelekile ukuba wonwabele indawo yethu yabucala, ichibi eligcwele ukuloba, ukuqubha okanye indawo yokonwabela irenti yakho ye-kayak. Sikwanazo neendledlana zendalo zokuphonononga.
Indawo yokupaka simahla eseyadini – ineendawo eziyi-99
Uza kuba kwilali yaseArarati encinci kakhulu kwikhowudi yayo ye-zip, ke yabelana noThompson, eyilali enkulu kancinane! Akukho zibane zokumisa ngaphezulu kweemayile ezili-10 nokuba uya kweliphi icala. Yimayile ezi-4 ukuya kwisikhululo segesi esikufutshane / igrocery encinci / i-deli / tavern kunye neemayile ezili-10 ukuya kwivenkile yeziyobisi / ikhemesti ekufutshane, ivenkile yotywala kunye nevenkile yokutya yasekhaya (iivenkile ezinkulu zeebhokisi kunye neevenkile zokutyela kukumgama wemizuzu engama-30). Esona sibhedlele sikufutshane siseSusquehanna, iimayile ezili-10. Ke, usentliziyweni yelizwe elinoxolo, kodwa okona kulungileyo ukuba uze uzilungiselele kwaye ugcwele.
Ikhaya lethu lisezantsi kwendlela ukusuka eJones Oaks ke sikufutshane kwaye siyafumaneka ukukunceda ngayo nayiphi na imiba, iinkxalabo okanye imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho.